Ixesha elingenazintloni 11 Umhla wokuKhutshwa kweNetflix: Ungawungena nini lo Mboniso? - Itv
Eyona Itv 'Ukungabi nazintloni' kuphelile, ke ungazifaka phi kwiNetflix?
'Ukungabi nazintloni' kuphelile, ke ungazifaka phi kwiNetflix?
Balindele nini abalandeli ixesha lokugqibela lexesha lokubonisa Iintloni ukuvela kwiNetflix?UPaul Sarkis / IXESHA LOKUBONISA.
NgeCawa, ixesha lokubonisa lisasaze uthotho lokugqibela lwe- Iintloni . Idrama eboniswe okokuqala ngoJanuwari ka-2011 kwaye yahambisa iziqendu ezili-134 ngaphezulu kwamaxesha alishumi elinanye, iyeyona ntambo ye-premium yentambo yothotho olude kakhulu olusebenzayo kwinkqubo. Emva kweminyaka elishumi, uhambo ekugqibeleni luye lwafikelela esiphelweni. Kodwa oko kukwabonelela ngamathuba kubalandeli abangazange babona isakhelo esinye se Iintloni Ukungena ekugqibeleni. Nangona kunjalo, ngekhe ube nakho ukuzinkcinkca ngothotho lwayo ngoku.
Nokuba ayibonisi ixesha lokubonisa okanye iNetflix, apho uthotho luhlala khona emva kokugqiba umgca wokubaleka, ibhengeze ngokusesikweni ixesha lonyaka 11 ukuba lifike eqongeni. Kodwa ngokusekwe kwimbali yakutshanje, sinakho ukuya kwindwendwe efundileyo.
Kwiminyaka edlulileyo, iziqendu ezitsha ze Iintloni iya kuthi gqi eqongeni lokusasaza kwiinyanga ezintandathu emva kwexesha lokugqibela lomoya kwi-Showtime. Umzekelo, ixesha le-10 lagqitywa ngoJanuwari 26, 2020, emva koko lavela kwi-Netflix kaJulayi 26; Ixesha le-9 lisongelwe ngo-Matshi 2019 ngaphambi kokubetha iNetflix ngo-Septemba wonyaka omnye. Ayaziwa ukuba ukuphazamiseka kwemveliso kunyanzeliswe yi-COVID-19 kunyaka ophelileyo, xa iSizini 11 yayenzelwe ukuba ibe yinkulumbuso kwasekuqaleni, iya kuba nefuthe Iintloni Imfuduko yedijithali.
Ukuba ixesha leenyanga ezintandathu lisasebenza, oko kuya kuthetha ukuba ixesha le-11 liya kufumaneka ukonwaba kwakho (e-United States) malunga ne-Novemba ka-2021. ubekhona ukubukela ukusuka ekuqaleni-ukuya-ekugqibeleni kubabukeli abalambileyo.
Ukuba uhlala ngaphandle kwe-United States, nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ujonge ibali elahlukileyo. Iintloni ifikile kumaqonga eNetflix aphesheya emva umlingane wayo wase-U.S. Kananjalo, asilindelanga ukuba iSizini 11 yenziwe ifumaneke kude kube kwangoko kwangoko nge-2022 kwiimarike ezinjengeNetflix yase-U.
'Iminyaka yeenja' i-Star Burt Reynolds izitya ku-De Niro, Brando, Eastwood kunye ne 'Star Wars'
I-Candy Crush Addiction iyinyani-kwaye inokukhokelela kwiziphumo eziyingozi
UMlawuli 'woLwandle oluPhakathi' kwiSahluko esilandelayo soPhando lwaKhe emva kwesiphelo
'UMTV osolwayo' uMvelisi oLawulayo-weeNtetho utyhila iimfihlelo, kunye nokunye okuninzi
imizekelo yekamva kubomi bokwenyani
Ijeff bezos umfazi wenet efanelekileyo i-2020
Ngaba ixilongo isityalo seclinton
mingaphi iminyaka ngaphambi kokophula okubi kungcono ubize uSaul
yintoni inkwenkwe ye-emo